Qorshe Xilka loogta Tuurayo Hogaanka Hirshabeelle oo bilowday (Faah-faahin) | KALSHAALE
Qorshe Xilka loogta Tuurayo Hogaanka Hirshabeelle oo bilowday (Faah-faahin)
Sep 13, 2018 - 15 Aragtiyood
Baladwayne ( Kalshaaele ) Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa wajahaya cadaadis siyaasadeed, tan iyo markii uu ka soo laabtay magaalada Kismaayo, halkaasoo uu kaga qeyb galay shirka Golaha Islaashiga Maamul goboleedyada.
Ilo wareedyo ku dhow dhow Xildhibaanada Hirshabeelle oo shirar ku leh Muqdisho ayaa sheegaya in si hoose u socdo saxiixa mooshinka laga diyaarinayo Madaxweyne Waare.
Kaalay dawladdu maxay ugu cara-baaba’daa Hirshabeele iyo Galmudug.
Puntland iyo Jubaland faraha lalama gali karo miyaa? Mase waa jamuuriyado gaar ah.
ISKA DHAAFA SHEEKADAASE AKHRISO DDIGNIINTAN:-
IS ISIS GOOD FOR THE JEWISH=ISRAELI.
XALANE DID 14/10=QARAXII ZOOBE.
Horta Jubboland ka reeb inaad ku lifaaqdo Puntland.
ilaa waqtii Xassan Shiikh ayaa lagu deganaa Jubbooyinka laakiin ninka ku gudban Axmed Cadde waa Kenya oo meesha dhuxusha ka gurato, dowladda Xamar uma heyso iney Kenya ka ceyriso Kismaayo dhan military iyo dhan siyaasadda Caalamka.
Midda Hirshabeele iyo Galmudug maahan maamulo iyo shacab taageersan ama aamimsan Federaal beeleedka,Waare iyo Xaaf waa wakiilada Villada u qaabilsan goboladaas, dhanka isku xirka iyo horjoogenimada.
Puntland waa maamul hal jufo oo la mid maahan maamulada kale oo ah qabiilo iyo deegaan kala duwan, sidoo kale ilaa 60kii Masuuliyiinta Villadu kama fileyn Canshuur iyo daacadnimo.
Gudoomiyaha Hirshabeele mr Waare ayaa yiri: wixii Somalia dumiyey oo ahaa in goboladii la dayacay markay gaajooden kulli Xamar isku yimaadeen, ilaa magaaladii dad la qaraxday
Waare waxaan ku xasuustaa: wuxuu yiri dadbaa nolol naga sugaya na doortay!
In dhuusamareeb ama Bosaso barwaaqo noqotay waa baraaraha Xamar, taas dabaal baan ogeyn 😐
Horjoogayaasha maamulgoboleedyadu ma aha kuwo u adeega dadka ay matalaan . Ma aha kuwo doonayo iney hormariyaan deegaanka ay ka masuulka yihiin . Maskaxdooda kuma jirto iney fidiyaan / daadajiyaan maamulka ilaa heerka ugu hooseeyo. Talada uguma jirto iney qaadaan canshuurta Beriga iyo dhamaan canshuuraha baaqda . Waxay ragani deganyihiin hoteello ku yaal Xamar , Nairobi iyo FUUFUULAND. Waxay u heelanyihiin oo kaliya iney ka warhayaan lacagaha deeqda ah ee ay ku YABOOHDA Bulsho ku sheegta caalamka.
Nasiibdarro / amaba nasiib-wanaag TUUGTAASI qaarkood waxay ku guuleysteen iney aamusiyaan shacabkooda . Inta uu shacabka Soomaaliyeed GEEL KU dhexraacayo ( fikirka ) magaalooyinka tuugtaas ayaanu ku kala taageereynaa boodka iyo dayaca ay nagu hayaan . Waayo SANAMKA aan caabudno ayaa na farayo inaan ku silicno adduun iyo aakhiraba.
Dadkeena illaa iyo maalinkaan maanta qofkastoo naga mid ah magac-uyaalkiisa waa mid WADAR ah . Midkastaba waxuu hadalka ka bilaabaa = Anaga = Waxaad moodaa inaan ka qadnay dhaxalkii Nabiga SCW .
Shekadii madaxwayne waare waxay ahayd mid
Xigmad leh shabeel baa loo yimi waxaa la yiri laguu
Waran caruurtadii geel baa ku tuntay shabelki wuxu
Yiri geel mahayn ee Ari buu ahaa war gorman
Anaga Ari noqonay kuye odayga wuxuu ku le yahay
Galmudug iyo hirshabele awood badan maleh oo
Dowlada ku durdurisa war ileen tanoo kale lool
Bye bye waare. Waanu ka badanahay dad yar oo xumaanta isku raaco. Waanu ka badanahay dad yar oo hunguriga sixun u raadiyo.
Dhulka wobiyada ee xurta ah waxaa wakiil ka ah mudane xasan cali kheyre. iyo farmaajo.
Dadka wanaagsan waxaa lagu yaqanaa. In ay is qabtaan. Hadii qolo marto wado qaldan. In la helo qolo kale oo kasoo hor jeesato.
Dhib ma jiro. Libaax xasan cali kheyre. Ayaa markii hore no keenay hadana isagii ayaa na dhaafinaayo. Oo weliba midkii doono kenaayo.
Waxaa madaxweyne farmaajo. Laga la.yahay in uu tolkii uga adkaado. Siduu xasan cali kheyre tolkii uga adkaaday.
Ma waxaad leedahey dad yar oo isla Guurto, isla jilaabto, marna isla burcad badeeyo ma noqon karno.
Bad ma noqonkarto Qulateyn, ee waarow adigaa hal qof ah ee is fududee.
– Kursiga Villada ayaa rag si tartiiba uga qulquleen Macaado laahi Kursi magac u yaal ah.
* Madaxweyne haa madaxweyne mar i dhahayeey
Somalidu runta isuma sheegto. Meesha waxaa ka maqan shaqadii madaxweynaha.
Madaxweyne farmaajo waa in uu tolkii sifiican ula macaamilaa wexey rabaan siyaa ee dadka kusoo dhex daraa. Ama waa in uu awood u adeegsadaa. Siyaasad u adeegsadaaba. Uu dad kasoo saaro meel loo raaco leh.
Caqli gal maaha waayeelada waan soo aruurinayaa. Kuwii kalana af kama keeni karo. Dulqaadkii in uu naga sii dhamanaayo. Waxaad ka aqrisan kartaa hadalka mudane waare.
Hadalka governo waare wuxuu ahaa hadal mugweyn leh. Inkastoo anigu aanan jecleyn calool ka hadalka.
Waare waa la cawinaya intey puntland jirto waa la
Difacaya federalka madaxwayne farnajo waa inuu
Ilaaliyo federalka dhiig baa loo soo huray waxa loga
Baxay boobkii iyo isbaradii dad baa weli radinaya in
Somalia dib u burburto la idinka yeeli maayo .. lool
Federaalka somaliya wuxuu faraj u noqoyay dadkii la biili jiray. Kkkkkkkkkk
Federaalka aduun ka ka jiro maaha in wax lagu siiyo ama aad adigu dad kale wax siiso. Ee waa in wax laysku darsado.
Alla maxaa federal qalad laga fahmay.
Reer aan ogohoow meel laydiin raaco yeesha.
Federaal ayaad keenteen weydinka yeelnay. Idinka ayaa diiday in uu sheqeeyo.
Madaxweyne somaliyeed ayaad qabiil ku dideen. weydinka bedelnay mid reerkiina ah ayaan keenay isagiina waad diideen. Doontii in laydinku celiyo moyee anigu garan maayo xal kale oo laydiin haayo.
warku waa kaftan. Cafis dhamaan.
Dontee ninkii adiga ku xoreyey haduu doon ku yimi
Adaa cirka roob ku og lool
Miskiin baa miska la fuulo leh laakiin waaroow haadaad xukunka ku waari weydo war ha kaa haro
Villa Somalia Ugandesekii waxay yiraadeen ambigaaga kuma sugi karno.
Jid mino laguu dhigin, hadaan helikopter kugu geyn lahayn basuka kusoo ridin, ee joog Xalane.
Waa run Farmaajo oi villa Somalia jooga hadaad aragto tagsi Murursade ayuu jilbaab kusoo galay Villada.
Maaha madaxweyne sharaf inta magaalada soo shexmara baabuur daadihinaysa madaxtooyada taga.